Faransiiska oo ku gacan sayray xayiraad dhanka hubka ah oo Sacuudiga lagusoo rogo - BBC News Somali
Faransiiska oo ku gacan sayray xayiraad dhanka hubka ah oo Sacuudiga lagusoo rogo
Madaxweynaha Faransiiska , Emmanuel Macron, ayaa ganafka ku dhuftay baaqyada ku aaddan in xayiraad lagusoo rogo hubka Midowga Yurub ee Sacuudiga laga iibiyo wuxuuna ku tilmaamay in ay baaqyadaasi yihiin kuwo "laab lakac ah"
Arrintan ayaa imaanaysa xilli ay jiraan baaqyo ka imaanaya dalka Austria oo dalalka kale ee xubnaha ka ah midowga Yurub ugu baaqaya in ay xayiraad saaraan iibka noocaas.
Arrintii Khashoggi ayaa saamayn taban ku yeelatay xiriirka Yurub iyo Sacuudiga - gaar ahaan marka laga hadlayo arrinta dhoofinta hubka.
Wasiirka arrimaha dibadda Austria, Karin Kneissl - oo dalkeedu uu hayo madaxtinimada meertada ah ee Midowga Yurub, ayaa dhabarka ka riixaysa xayiraad ay Sacuudiga kusoo rogaan dhammaan dalalka xubnaha ka ah Midowga Yurub.
Faransiiska oo ciidammadiisa kala baxaya CAR
Baarlamaanka Yurb ayaa gudbiyey khamiistii qaraar arrintan ku baaqaya.
Baaqyada caynkaan oo kale ah ma ahan kuwo cusub. Baarlamaanka ayaa horay u ansixiyey qaraaro lamid ah, oo la xiriira dagaalka Yemen.
Balse diiradda siyaasaseed ee xooggan ee dilka Khashoggi ayaa keenaysa in Midowga Yurub ay ka walaacaan hubka waaweyn ee loo dhoofinayo Sacuudiga.
Xukuumadda Jarmalka ayaa dhaqan galisay xayiraad kumeel gaar ah, inta uu kala caddaanayo kiiska Jamal Khashoggi. Balse wasiirka dhaqaalaha ee dalkaas ayaa carabaabay in ay furan tahay in Midowga Yurub ay si guud uga wada xaajoodaan mawqifkooda arritan ku aaddan.
Britain ayaa mawqif lamid ah kan Faransiiska ku adkaysanaysa. Machadka cilmi baadhista nabadda ee caalamiga ah ee Stockholm ayaa ku qiyaasay in kala bar hubka ay Britain dhoofisay intii u dhaxaysay sabadihii 2013 iyo 2017 ay gaysay Sacuudi carabiya. Ayna ka faaiday balaayiin doolar, haddaba go'aan isku mid ah oo ay Midowga yurub ka qaataan arrintan ayaa ah mid aad u fog.